नियमित से’क्स गर्ने महिला कसरी चिनिन्छन् ? देखिन्छ शरीरमा यस्तो लक्षण – Kavrepati
Home / रोचक / नियमित से’क्स गर्ने महिला कसरी चिनिन्छन् ? देखिन्छ शरीरमा यस्तो लक्षण
admin August 3, 2021	रोचक Leaveacomment 661 Views
एजेन्सी । निमयित यौ’न सम्बन्ध राख्ने महिला वा पुरुषलाई किटान गर्न गाह्रो छ । तर, महिलाको भने केही शारीरिक रुपमा परिवर्तन आउने दाबी गरिएको छ ।
पुरुषको तुलनामा केही महिलाको शारीरिक रुपमा परिवर्तन आउने गर्छ । यसलाई यौ’न सम्बन्धको कारण मात्रै नलिई अन्य मा’नसिक लगायत कारण मानिन्छ । तर, एक अध्ययनले भने नियमित यौ’न सम्बन्ध राख्ने महिलाको सजिलै पहिचान गर्न सकिने दाबी गरेको छ ।
सर्वे युनिभर्सिटी अफ लिड्सका सोधकर्ताले गरेको एक अध्ययनअनुसार नियमित यौ’न सम्बन्ध राख्ने महिलाको शारीरिक बनावट केही मात्रामा परिवर्तन भए पनि एक दिनमा नै धेरै पटक यौ’न सम्पर्क गर्ने महिलाहरुको नि’तम्ब अर्थात हिप फुलेर ठूलो हुने गर्छ ।
अनुसन्धानको क्रममा महिलाहरुको हिपको सबै भन्दा ठूलो भाग र कमरको सबै भन्दा पातलो भागको नाप लिइएको बताइएको छ । अनुसन्धानका क्रममा जुन महिलाले एक दिनमै धेरै पटक यौ’न सम्बन्ध राखे उनीहरुको हिपको आकार अरु महिलाको तुलनामा निकै ठूलो थियो ।
Previous चम्सुरि साउनमा यसरी हरियो सजिइन ,नाचिन छमछम (हेर्नुस् भिडियो )
Next देउवाको ठाडो निर्देशनमा कुलमानलाइ बिधुत प्राधिकरणमा भित्राउने तयारि